Top 3 Photo Editor for Blackberry - Best Blackberry Photo Apps
> Resource > Talooyin > Top 3 Best Photo Editor for Blackberry
Tafatirka sawiro ku saabsan telefoonada gacanta waa mid xiiso leh oo ku haboon. Haddii aad heshay telefoonka Blackberry oo aad rabto inaad xaalkaa photos on telefoonka gacanta, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah oo awood badan tifaftirayaasha sawir for Blackberry .
Waxaa jira in badan oo Chine tafatirka sawir for Blackberry tafatirka sawirka. Dhammaan iyaga ka mid ah waa wax fudud oo xiiso leh si ay u isticmaalaan. Ka mid ah, waxaa jira qaar ka mid ah run ahaantii weyn barnaamijyadooda tafatirka sawir Blackberry in kugu caawin karo samaynta sawirrada aad soo jiidasho iyo xiiso leh.
Halkan 3 sare barnaamijyadooda tafatirka sawir wanaagsan ee Blackberry ayaa la soo jeediyay. Bal aan fiirino ee Chine tafatirka sawir Blackberry ugu caansan iyo sare.
Editor Photo for Blackberry 1: Rinjiga Mini
Rinjiga Mini yimaado iyadoo qaar ka mid ah muuqaalada tafatirka sawir weyn. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto farshaxanka clip in ay sawiro aad u iftiimin ilaa sawiro aad dhakhso leh. Waxaad sidoo kale kordhin kartaa hal-abuurka ay ku daray qaar ka mid ah qoraalka iyo biibiile maadda ah in ay tiirarkii si aad u shakhsiga iyo xiiso leh. Hawlaha tafatirka sawir Common sida beerista, zooming, iwm sidoo kale la siiyaa in this Blackberry app tafatirka sawir. Waxaa la soo dhaweeyey oo sawir tifaftirayaasha bilow ah oo doonaya in woxogaa la cayaarto sawiro.
Editor Photo for Blackberry 2: Picture Magic
Picture Magic waa qalabka tafatirka sawir feature hodan ee telefoonada gacanta Blackberry la screen xiriiri taageeray. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad fallaadho, indhaha lagu qoslo, muraayadaha, dahabka dhaldhalaalaan, biibiile la buuxiyo, waji cajiib ah, timaha wejiga, biibiile la qoraalka iyo hadalka dari aad sawirradaada. Just wajib aad male leh, kuwaas oo dhamaan qaybaha tafatirka! Intaas waxaa sii dheer, waxaad samayn kartaa kaararka Salaan shakhsiga iyo bandhigyo arrintan editor sawir Blackberry.
Editor Photo for Blackberry 3: Doodle
Doodle bixisaa 16 midabo iyo 4 tirada buraash si aad u samayn rinjiyeynta farta si xor ah. Saamaynta tafatirka sawir caadi ah sida Colors invert, baaxadda Gray, infrared, Sepia, iwm waxaa la siiyaa Spice ilaa sanamyadiinna. Editor sawir Tani for Blackberry waa la jecel yahay dad hal abuur leh oo jecel qaadashada sawirada iyo sawir.
Sida loo sameeyo a Shakhsiga xisbiga Engagement Photo Martiqaad Card